कोरोनाले अब हप्ता दिनमा होइन, तीन दिनमै फोक्सोलाई ५०–७० प्रतिशत सं’क्रमित गरिरहेछ, त्यसैले बढ्दै मृ’त्युको आँकडा – SamayaNepal | हरेक सत्य तथ्य खबरमा ……. कोरोनाले अब हप्ता दिनमा होइन, तीन दिनमै फोक्सोलाई ५०–७० प्रतिशत सं’क्रमित गरिरहेछ, त्यसैले बढ्दै मृ’त्युको आँकडा – SamayaNepal | हरेक सत्य तथ्य खबरमा …….
भारतमा कोरोनाको दोस्रो लहर चलिरहेको छ । नेपालमा पनि दैनिक जसो सं’क्रमितको संख्यमा वृद्धि भइरहेको छ । यो लहरमा फोक्सोलाई हा’नी पुर्याउने गतिमा पनि व्यापक वृद्धि भइरहेको छ । भारतीय मिडियाले विज्ञलाई उद्धृत गर्दै प्रकाशित गरेको समाचार अनुसार दोस्रो लहर अर्थात् कोरोनाभाइरसको नयाँ स्ट्रेनले २–३ दिनमा नै फोक्सोलाई ५०–७० प्रतिशतसम्म सं’क्रमित गर्न सक्छ । जबकी पहिलो लहरमा यसमा करिब ७ दिनको समय लाग्थ्यो । यसैकारण दोस्रो लहरमा मृ’त्युको आँकडा पनि बढिरहेको छ ।
सं’क्रमणबारे पत्ता लाग्नु अघि नै फोक्सोमा क्ष’ती भइसक्छः
सामान्यतयाः बिरामीमा कोरोनाको सं’क्रमण पुष्टि हुन दुईदेखि तीन दिनको समय लाग्छ । एन्टिजन परीक्षण, आरटी–पीसीआर वा सिटी स्कयानको रिपोर्ट आउनमा २४ देखि ३६ घण्टाको समय लाग्छ । त्यतिबेला सम्म त सं’क्रमणका फोक्सोमा फैलिसकेको हुन्छ । पल्मोनोलजिस्टका अनुसार २० वर्षसम्म दैनिक २–३ वटा चुरोट पिउँदा जति क्षती हुन्छ त्यति २–३ दिनमा भइसक्छ ।
यसपटक यसरी फैलिरहेको छ सं’क्रमणः
पहिलो लहरः पाँचौं दिन बिरामीको फोक्सोको स्थितिको सिटी स्क्यान सं’क्रमणको ५–७ दिनसम्म रिपोर्ट नर्मल आउँथ्यो ।
दोस्रो लहरः दोस्रो दिन बिरामीको फोक्साको सिटी स्क्यान, ५० प्रतिशत सं’क्रमण ।
दोस्रो लहरः तेस्रो दिनको सिटी स्क्यान, ७० प्रतिशत सं’क्रमण ।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको April 13, 2021 April 13, 2021 160 Viewed